ग्रामीण पत्रकार मन्चको नाममा आतंक मच्चाउदै यी पत्रकार, भन्छन-तेरो समाचार लेखिदिउ ? – BUSINESSPANA.COM
ग्रामीण पत्रकार मन्चको नाममा आतंक मच्चाउदै यी पत्रकार, भन्छन-तेरो समाचार लेखिदिउ ?
झापा – गौरादह नगरपालिका वडा एकको कार्यालयले ‘ग्रामिण पत्रकार मञ्च गौरादह’ नामक फेसबुक आइडीबाट प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
गौरादह -१ का वडाअध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आरोपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
‘अघिल्लो वर्ष कोरोना पिडितहरुलाई टोल विकास समिति मार्फत दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गौरादह सहितको भवनलाई वितरण केन्द्रको रुपमा प्रयोग गरेको थियो ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सो केन्द्रबाट राहत वितरण गरेर बाँकी रहेको ५/७ के.जी. हाराहारी मुसुरी दाल टोल विकास समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखाकै सार्वजनिक भवन सुरक्षित रुपमा राखिएको हो।’
विज्ञप्तिमा गौरादह न.पा.ले भण्डारण गरेर बिग्रिएको चामलसंग जोडेर वडा नं १ र वडाका जनप्रतिनिधिको नाम उल्लेख गरेरै राहत सामग्रीमा अनियमितता गरेको भन्ने तथ्यहीन, भ्रामक र कपोकल्पित समाचार सम्प्रेषण भएको जनाएको छ।
वडाअध्यक्ष भण्डारीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा तथ्यहिन र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्ने फेसबुक प्रयोगकर्तालाई आवश्यक कानूनी उपचार समेत खोज्ने चेतावनी दिईएको छ।
उनले महामारीको समयमा जीवनलाई समेत जोखिम राखेर अहोरात्र नागरिकहरुको सेवामा निस्वार्थ रुपले समर्पित रही खटिएका वडा सदस्य कोमल प्र. ढुंगाना सहित जनप्रतिनिधिको चरित्रहत्या गर्न उद्धत ‘ग्रामिण पत्रकार मञ्च गौरादह’ नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन।
हिजो बिहिबार ‘ग्रामिण पत्रकार मञ्च गौरादह’ नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले वडा सदस्य कोमलप्रसाद ढुंगानालाई खाद्यान्न लुकाइ छिपाइ राखेर हिनामिना समेत गरेको हुन सक्ने भन्दै गम्भीर आरोप सहितको फेसबुक पोष्ट गरेका थिए ।
‘ग्रामिण पत्रकार मञ्च गौरादह’ नाम गरेको फेसबुक आइडीका संचालक युवराज रेग्मी रहेको बुझिएको छ।
यसअघि पनि उनले ‘अन्टसन्ट’ लेखेर कहिले तर्साउने त कैले मन नपरेका मान्छेको मानमर्दन गर्ने गरेको गुनासो स्थानियको छ । उनले एक विद्यालयको समाचार आउदैछ भन्दै सो आइडिबाट चेतावनी दिएका थिए तर, समाचार केही पनि आएको थिएन। सो आइडिमा कसैले चित्त नबुझे कमेन्ट गर्दा तेरो न्युज लेखदिम भन्दै थर्काएको भानु प्रताब न्यौपानेले बताए । उनले भने, सो आइडिबाट म सङ मनपरि बोले । पत्रकारको सस्थाको नाम लिएर ब्ल्याकमेलिङ गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्छ । गौरादहका पत्रकार राजु पोखरेल भन्छन- म गौरादहमा जन्मिएको मान्छे , पत्रकारिता गरेको एक दसक पुग्यो । तर यो ग्रामिण पत्रकार मन्च कैले जन्मियो केही थाहा छैन । अनबिज्ञ छु । ब्यक्तिगत कुण्ठा रिस पोख्न सस्था र पत्रकारिताको दुरुपयोग नगरौ ।
Previous: कृषि बजेट आत्मनिर्भरता केन्द्रित
Next: ४५ अंकले ओरालो लागेर २७८२.६८ को बिन्दुमा नेप्से, कारोबार रकम भने साढे १३ अर्बमा समिति